Midowga Europe oo IMF u gudbisay Lacag lagu taageerayo Dhaqaalaha iyo Horumarinta Somalia.
Hadal ka soo baxay Ururka Midowga Europe ayaa lagu sheegay inay 1 million oo EURO ku wareejiyeen Hay’adda Caalamiga ee Lacagaha Adduunka ee IMF , taasi oo qeyb ka ah Kaalmada lagu taageerayo Dhaqaalaha Dowladda iyo Xoojinta Horumarinta ee Somalia.
Taageeradda EU-da waxay qeyb ka qaadanayaasaa sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka lala leeyahay Hay’adaha Caalamiga ee Maaliyadda “The International Financial Institutions “ iyo sidii asaas shaqo loogu dhigi lahaa Taagereradooda Maaliyadeed.
Somalia ayaa haatan u qalmin in ay helaan wax kasta o oKaalmo ah iyadoo aan loo soo marsiinin Hay’adda IMF oo Xarunteeda Dhexe ku taallo maagalladda Washington, taas ioo horey u bixisay 328 million oo Dollar.
Hay’adda Caalamiga ee Lacagaha Adduunka (IMF) waxay Dowladda Somalia ee haatan jirta aqoonsatay muddo hataan laga joogo 3-sanno, waxayna markii ugu horreysay dib-u-eegistii ugu horreysay in ka badan 26 sanno ku samaysay Somalia sannadkii 2015-kii.
Sanduuqa Dhaqaalaha Somalia waxa uu qeyb ka yahay Taageerida Xaallada Adag ee Isbefelka iyo in Soomaalida laga taageero dadaalkooda ay ku dhisayaan Hay’adaha furaha u ah Dhaqaalaha, Horumarinta iyo Siyaasadda Dhaqaalaha.
Sanduuqa Dhaqaalaha Somalia ayaa la filayaa in ay ku bixiyaan in ka badan 9 million oo Dollar taageeradda Kaalmadda Farsamada iyo Tababaradda tan iyo sannadka 2018-ka.
Dhinaca kale, Madaxa Ergadda EU-da, ahna Danjiraha u joogta Somalia, Ambassador Veronique Lorenzo ayaa shegtay inay dadka Soomaalida degdeg ugu baahan yihiin inay arkaan inay soo hagaagayso Nolol-maalmeedkooda.
Waxay intaasi ku dartay in ka badan 20 sanno oo ay dagaalo ka jireen Somalia inay dadka Soomaalida haatan wax badan qabsadeen, isbedelna lagu sameeyey Dhaqaalaha iyo Maaliyadda.
Ambassador Veronique Lorenzo waxay sheegtay inay rajeynayso in Dowladda soo socoda ee Somalia dedejin doonto xawaaraha Isbedelada, si loo kobciyo Hay’adaha muhiimka u ah Maaliyadda, Dhaqaalaha iyo Horumarka Somalia.